Adidas ထုတ်ကုန်နဲ့ပတ်သက်ပြီး အမေးများနေတဲ့ ကွဲပြားခြားနားသော Made In နိုင်ငံတွေအကြောင်း
17 Jul 2018 . 2:41 PM
Adidas ချစ်သူတွေအားလုံးကို အရင်ဆုံးမင်္ဂလာပါလို့ နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ ခေါင်းစဉ်ကိုဖတ်ပြီး ဘယ်လိုအကြောင်းအရာတွေကို ဖတ်ရှုရမလဲဆိုတာကို စိတ်ဝင်စားနေကြသူတွေအတွက် အားလုံးအတွက် အသုံးတည့်မယ့် ဗဟုသုတတစ်ခုကို ဒီပို့စ်မှာတင်ဆက်သွားမှာပါ။ အဲဒီတော့ ဒီပို့စ်မှာ ပြောပြပေးသွားမှာကတော့ Adidas ဖိနပ်တွေမှာ တွေ့ရတဲ့ Made In နိုင်ငံတွေ အကြောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Adidas အမှတ်တံဆိပ်ဟာ ဂျာမဏီနိုင်ငံက စတင်မွေးဖွားခဲ့တဲ့ အမှတ်တံဆိပ်ဆိုတာ အားလုံးသိကြပါတယ်။ သဘာဝကျကျတွေးမယ်ဆိုရင်တော့ ဂျာမဏီနိုင်ငံထုတ်အမှတ်တံဆိပ်နဲ့ ကုန်ပစ္စည်းတွေဟာ ဂျာမဏီနိုင်ငံကပဲ ထုတ်လုပ်ဖန်တီးရမှာပါ။ ဒီအချက်ဟာ အနေအထားတစ်ခုအထိ မှန်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ ဝယ်လိုအားတွေများနေတဲ့ အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုအနေနဲ့ ဝယ်ယူအားပေးသူတွေရဲ့ လိုအင်ဆန္ဒတွေကို ဖြည့်ဆည်းပေးဖို့အတွက် လုပ်ငန်းကိုဖြန့်ကျက်ပြီး အခြားနိုင်ငံတွေမှာ စက်ရုံတွေကို တည်ထောင်ရပါတယ်။ ကုန်ထုတ်လုပ်တဲ့ စက်ရုံတည်ရှိတဲ့ နိုင်ငံအလိုက် Made In နိုင်ငံတွေဟာလည်း အသီးသီးကွဲပြားသွားတာကြောင့် အဲဒီမှာစပြီး နားလည်မှုတွေ ကွဲလွဲသွားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကိစ္စဟာ လူအမေးများတဲ့ ကိစ္စတစ်ခုလည်း ဖြစ်သလို Adidas တင်မက အခြားကုန်ထုတ်ကုန်တွေအတွက်ပါ အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိတဲ့အတွက် အခုလို Made In နိုင်ငံတွေ အကြောင်းကို ဗဟုသုတဖြစ်ဖွယ် ရေးသားတင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်။
ကမ္ဘာ့တိုက်ပေါင်းစုံမှာ ထည်ထောင်ထားတဲ့ Adidas စက်ရုံပေါင်းများစွာ
ကောက်ယူထားတဲ့ စစ်တမ်းတွေအရဆိုရင် ၂၀၁၀ ခုနှစ်အထိ တစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ နိုင်ငံပေါင်း ၆၉ နိုင်ငံမှာ Adidas ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်တဲ့ စက်ရုံတွေရှိပါတယ်။ Adidas ဟာ စက်ရုံတွေကို အာဖရိကတိုက်၊ အာရှတိုက်၊ သြစတေးလျတိုက်နဲ့ နယူးဇီလန်၊ ဥရောပတိုက်နဲ့ အမေရိကန်တိုက်တို့မှာ အသီးသီး တည်ထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ တစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ လုပ်ငန်းကို တွင်ကျယ်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့နဲ့ တစ်ကမ္ဘာလုံးရဲ့ ဝယ်လိုအားတောင်းဆိုမှုတွေကို ဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာ့တိုက်ပေါင်းများစွာမှာ စက်ရုံတည်ထားတဲ့ Adidas အနေနဲ့ စက်ရုံတွေကို ပြီးစလွယ် တည်ထောင်ခဲ့တာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ Adidas အမှတ်တံဆိပ်ထုတ်ကုန်တွေကို ထုတ်လုပ်ပြီး ကမ္ဘာ့နယ်ပယ်အသီးသီးကို တင်ပို့မှာဖြစ်တဲ့အတွက် ထုတ်ကုန်တွေရဲ့ အရည်အသွေးကို အမြဲတမ်းပြည့်ဝနေအောင် ထိန်းသိမ်းထားပြီး နိုင်ငံတကာအရည်အသွေးနဲ့ စံချိန်စံညွှန်းတွေကို ပြဌာန်းသတ်မှတ်ထားပြီးသား ဖြစ်ပါတယ်။
Adidas စက်ရုံပေါင်းများစွာကို အသေးစိတ်အကျယ်ဖြန့်ကြည့်တဲ့အခါ
Adidas စက်ရုံတွေကို အသေးစိတ်ရေတွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင် အာရှတိုက်ဟာ Adidas စက်ရုံတွေ အများစုတည်ထားရာ တိုက်ဖြစ်နေပါတယ်။ Adidas ရဲ့တရားဝင်ထုတ်ပြန်ချက်အရဆိုရင် Adidas ရဲ့ ၂၇ ရာခိုင်နှုန်းသော စက်ရုံတွေဟာ တရုတ်ပြည်မှာတည်ရှိနေပါတယ်။ စက်ရုံတွေကို အသေးစိတ် နိုင်ငံအလိုက် ရေတွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင် အာရှတိုက်အတွင်းမှာပဲ တရုတ်နိုင်ငံမှာ ၃၃၇ ရုံ၊ အိန္ဒိယမှာ ၉၉ ရုံ၊ အင်ဒိုနီးရှားမှာ ၇၉ ရုံနဲ့ ဗီယက်နမ်မှာ ၇၆ ရုံ၊ ဒါ့အပြင် ဂျပန်၊ ကိုရီးယား၊ ထိုင်ဝမ်၊ ထိုင်း၊ ကမ္ဘောဒီးယား၊ ပါကစ္စတန်နဲ့ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတို့မှာ စက်ရုံပေါင်း ၁၀ ရုံကနေ ၆၀ အထိ စက်ရုံအရေအတွက်ရှိပါတယ်။ ဒါတောင် ကမ္ဘာ့အရှေ့ပိုင်းအာရှတိုက်တစ်ခုတည်းအတွင်းမှာပဲ ရှိပါသေးတယ်။ အနောက်နိုင်ငံတွေနဲ့ ဥရောပတိုက်တွေကို ထည့်သွင်းမရေတွက်ရသေးပါဘူး။
အံ့သြစရာကောင်းတဲ့တစ်ချက်က Adidas အမှတ်တံဆိပ်ရဲ့ မိခင်တိုင်းပြည်ဖြစ်တဲ့ ဂျာမနီနိုင်ငံမှာတောင် Adidas စက်ရုံ ၂၃ ရုံပဲ တည်ထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီအရေအတွက်ဟာ ဥရောပတိုက်မှာတော့ အများဆုံးပါ။ တခြားဥရောပနိုင်ငံတွေဖြစ်ကြတဲ့ အီတလီ၊ စပိန်နဲ့ ယူကေအတွင်းမှာ စက်ရုံပေါင်း ၁၃ ရုံ။ ဆွီဒင်၊ ဒိန်းမတ်နဲ့ ဖင်လန်နိုင်ငံတို့မှာ စုစုပေါင်း ၉ ရုံ (ဆွီဒင်နိုင်ငံထဲမှာပဲ ၇ ရုံ) တည်ထားပါတယ်။ နောက်ပြီးသြစတေးလျတိုက်နဲ့ နယူးဇီလန်တို့မှာလည်း စက်ရုံတွေတည်ထားပေမယ့် စက်ရုံ ၁၀ ရုံအထိ အရေအတွက်ကို လျှော့ချလိုက်ပါတယ်။ အမေရိကတိုက်အနေနဲ့ဆိုရင်လည်း ကုန်ထုတ်လုပ်တဲ့ စက်ရုံတွေတည်ထားတာ များပြားတယ်လို့ ဆိုရမှာပါပဲ။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ အမေရိကတိုက်မှာ စက်ရုံပေါင်း ၂၁၅ ရုံရှိနေလို့ပါပဲ။ မြောက်အမေရိကတိုက်အတွင်းမှာ အမေရိကန်နိုင်ငံဆိုရင် ၇၁ စက်ရုံ၊ ကနေဒါမှာ ၂၉ ရုံနဲ့ မက္ကစီကိုတို့မှာ ၁၉ ရုံ အသီးသီး တည်ထားပြန်ပါတယ်။ တောင်အမေရိကတိုက်မှာဆိုရင် ကုန်ထုတ်လုပ်တဲ့ စက်ရုံအများဆုံးကတော့ ဘရာဇီးနိုင်ငံဖြစ်ပြီး စက်ရုံပေါင်း ၅၀ အထိရှိနေပါတယ်။ အနောက်တိုင်းနိုင်ငံချည်းပဲ ပေါင်းလိုက်ရင်တော့ အရေအတွက် အတော်လေးများတယ်လို့ ဆိုလို့ရပါတယ်။
ပြည့်မီတဲ့အဆင့်အတန်းနဲ့ Adidas ကုန်ပစ္စည်းအရည်အသွေးကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်မှု
ဥပမာအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင် iPhone တွေကိုပဲကြည့်ပါ။ iPhone တွေဟာ ဝယ်လိုအားနဲ့ ရောင်းလိုအားမမျှတဲ့အတွက် iPhone တွေကို အရေအတွက်များများထုတ်ဖို့ တရုတ်ပြည်မှာစက်ရုံတွေ တည်ထားတယ်ဆိုတာ အားလုံးသိကြမှာပါ။ ဒါပေမယ့် ပါဝင်တဲ့နည်းပညာ၊ အရည်အသွေးနဲ့ တာရှည်ခံမှုတွေကတော့ တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာရှိတဲ့ iPhone တွေနဲ့ တန်းတူပါပဲ။ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာရှိနေတဲ့ KFC လို စားသောက်ဆိုင်မျိုးဆိုရင်လည်း တည်ထားတဲ့နိုင်ငံသာ ကွဲပြားသွားတာ သူ့ကြက်ကြော်ရဲ့အရသာနဲ့ ချက်ထားတဲ့ဟင်းချက်နည်းစနစ်ဟာ တစ်ကမ္ဘာလုံးနဲ့တန်းတူပါပဲ။ ဒီလိုနည်းတွေနဲ့ပဲ အခြားနိုင်ငံကတင်သွင်းလာတဲ့ ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေနဲ့ အစားအသောက်တွေကို ကျွန်တေ်ာတို့ဟာ ဝယ်ယူစားသုံးနေကြတာပါ။ အဲဒီအချက်ဟာ Adidas အတွက်လည်း တန်းတူအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။
ဂျာမဏီနိုင်ငံက ထုတ်လုပ်ပြီး Made In က အင်ဒိုနီးရှားဖြစ်လို့၊ တရုတ်ဖြစ်လို့၊ ဗီယက်နမ်ဖြစ်လို့ ဝယ်ဖို့တွန့်ဆုတ်နေတဲ့ အတွေးတွေကို ဒီစာလေးဖတ်ပြီးရင် ဖျောက်ဖျက်လိုက်ဖို့လိုပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ Adidas စက်ရုံတိုင်းမှာ ဟိုးအစဉ်အဆက် တောက်လျောက်ချမှတ်လာခဲ့တဲ့ အရည်အသွေးထိန်းသိမ်းဖို့ နည်းစနစ်နဲ့ လိုက်နာရမယ့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေ ရှိနေလို့ပါပဲ။
Adidas made in India
တစ်ကမ္ဘာလုံးကိုတင်သွင်းရမယ့် ထုတ်ကုန်တွေကို Adidas အနေနဲ့ အရည်အသွေးအလျော့ခံပြီး Brand နာမည်အကျခံပါ့မလားဆိုတာကို တစ်ချက်စဉ်းစားကြည့်ပါ။ ဒီလောက်ဆိုရင် ဘာကြောင့် Made In နိုင်ငံတွေဟာ ကွဲပြားရသလဲ? ကွဲပြားမှုအပေါ်မှာ အကျိုးသက်ရောက်မှု ဘယ်လိုရှိသလဲဆိုတာကို အားလုံးသိသွားကြလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
Made In နိုင်ငံကိုကြည့်ပြီး ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုရဲ့တန်ဖိုးကို ခန့်မှန်းသတ်မှတ်တာ မမှန်ကန်ဘူးဆိုတာကို ဒီစာလေးဖတ်ပြီး သိရှိနားလည်သွားမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ နာမည်ကြီးထုတ်ကုန်တစ်ခုရဲ့ စစ်မှန်မှုအရည်အသွေးကတော့ ဘယ်နိုင်ငံကပစ္စည်းနဲ့ ယှဉ်ယှဉ် အတူတူပဲဆိုတာ အားလုံးသိဖို့လိုပါတယ်။ အချိန်ပေးပြီး ဒီအထိဖတ်ရှုခဲ့ပေးတဲ့ Adidas ပရိသတ်များကို ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်။ နောက်လည်း အားလုံးဗဟုသုတရမယ့် အခုလိုပို့စ်လေးတွေကို တင်ဆက်ပေးသွားပါ့မယ်။ ဖတ်ရှုသူ စာဖတ်ပရိသတ်များအားလုံးကို အစဉ်လေးစားလျက်ပါလို့ ဒီကနေပြောလိုက်ရပါတယ်။
Adidas ထုတျကုနျနဲ့ပတျသကျပွီး အမေးမြားနတေဲ့ ကှဲပွားခွားနားသော Made In နိုငျငံတှအေကွောငျး
Adidas ခဈြသူတှအေားလုံးကို အရငျဆုံးမင်ျဂလာပါလို့ နှုတျဆကျလိုကျပါတယျ။ ခေါငျးစဉျကိုဖတျပွီး ဘယျလိုအကွောငျးအရာတှကေို ဖတျရှုရမလဲဆိုတာကို စိတျဝငျစားနကွေသူတှအေတှကျ အားလုံးအတှကျ အသုံးတညျ့မယျ့ ဗဟုသုတတဈခုကို ဒီပို့ဈမှာတငျဆကျသှားမှာပါ။ အဲဒီတော့ ဒီပို့ဈမှာ ပွောပွပေးသှားမှာကတော့ Adidas ဖိနပျတှမှော တှရေ့တဲ့ Made In နိုငျငံတှေ အကွောငျးပဲ ဖွဈပါတယျ။
Adidas အမှတျတံဆိပျဟာ ဂြာမဏီနိုငျငံက စတငျမှေးဖှားခဲ့တဲ့ အမှတျတံဆိပျဆိုတာ အားလုံးသိကွပါတယျ။ သဘာဝကကြတြှေးမယျဆိုရငျတော့ ဂြာမဏီနိုငျငံထုတျအမှတျတံဆိပျနဲ့ ကုနျပစ်စညျးတှဟော ဂြာမဏီနိုငျငံကပဲ ထုတျလုပျဖနျတီးရမှာပါ။ ဒီအခကျြဟာ အနအေထားတဈခုအထိ မှနျပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ တဈကမ်ဘာလုံးအတိုငျးအတာနဲ့ ဝယျလိုအားတှမြေားနတေဲ့ အမှတျတံဆိပျတဈခုအနနေဲ့ ဝယျယူအားပေးသူတှရေဲ့ လိုအငျဆန်ဒတှကေို ဖွညျ့ဆညျးပေးဖို့အတှကျ လုပျငနျးကိုဖွနျ့ကကျြပွီး အခွားနိုငျငံတှမှော စကျရုံတှကေို တညျထောငျရပါတယျ။ ကုနျထုတျလုပျတဲ့ စကျရုံတညျရှိတဲ့ နိုငျငံအလိုကျ Made In နိုငျငံတှဟောလညျး အသီးသီးကှဲပွားသှားတာကွောငျ့ အဲဒီမှာစပွီး နားလညျမှုတှေ ကှဲလှဲသှားတာပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဒီကိစ်စဟာ လူအမေးမြားတဲ့ ကိစ်စတဈခုလညျး ဖွဈသလို Adidas တငျမက အခွားကုနျထုတျကုနျတှအေတှကျပါ အကြိုးသကျရောကျမှုရှိတဲ့အတှကျ အခုလို Made In နိုငျငံတှေ အကွောငျးကို ဗဟုသုတဖွဈဖှယျ ရေးသားတငျဆကျပေးလိုကျရပါတယျ။
ကမ်ဘာ့တိုကျပေါငျးစုံမှာ ထညျထောငျထားတဲ့ Adidas စကျရုံပေါငျးမြားစှာ
ကောကျယူထားတဲ့ စဈတမျးတှအေရဆိုရငျ ၂၀၁၀ ခုနှဈအထိ တဈကမ်ဘာလုံးအတိုငျးအတာနဲ့ နိုငျငံပေါငျး ၆၉ နိုငျငံမှာ Adidas ကုနျပစ်စညျးထုတျလုပျတဲ့ စကျရုံတှရှေိပါတယျ။ Adidas ဟာ စကျရုံတှကေို အာဖရိကတိုကျ၊ အာရှတိုကျ၊ သွစတေးလတြိုကျနဲ့ နယူးဇီလနျ၊ ဥရောပတိုကျနဲ့ အမရေိကနျတိုကျတို့မှာ အသီးသီး တညျထားတာပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဒါဟာ ဘာကွောငျ့လညျးဆိုတော့ တဈကမ်ဘာလုံးအတိုငျးအတာနဲ့ လုပျငနျးကို တှငျကယျြစှာလုပျဆောငျနိုငျဖို့နဲ့ တဈကမ်ဘာလုံးရဲ့ ဝယျလိုအားတောငျးဆိုမှုတှကေို ဖွညျ့ဆညျးပေးဖို့ပဲ ဖွဈပါတယျ။ ကမ်ဘာ့တိုကျပေါငျးမြားစှာမှာ စကျရုံတညျထားတဲ့ Adidas အနနေဲ့ စကျရုံတှကေို ပွီးစလှယျ တညျထောငျခဲ့တာတော့ မဟုတျပါဘူး။ Adidas အမှတျတံဆိပျထုတျကုနျတှကေို ထုတျလုပျပွီး ကမ်ဘာ့နယျပယျအသီးသီးကို တငျပို့မှာဖွဈတဲ့အတှကျ ထုတျကုနျတှရေဲ့ အရညျအသှေးကို အမွဲတမျးပွညျ့ဝနအေောငျ ထိနျးသိမျးထားပွီး နိုငျငံတကာအရညျအသှေးနဲ့ စံခြိနျစံညှနျးတှကေို ပွဌာနျးသတျမှတျထားပွီးသား ဖွဈပါတယျ။
Adidas စကျရုံပေါငျးမြားစှာကို အသေးစိတျအကယျြဖွနျ့ကွညျ့တဲ့အခါ
Adidas စကျရုံတှကေို အသေးစိတျရတှေကျကွညျ့မယျဆိုရငျ အာရှတိုကျဟာ Adidas စကျရုံတှေ အမြားစုတညျထားရာ တိုကျဖွဈနပေါတယျ။ Adidas ရဲ့တရားဝငျထုတျပွနျခကျြအရဆိုရငျ Adidas ရဲ့ ၂၇ ရာခိုငျနှုနျးသော စကျရုံတှဟော တရုတျပွညျမှာတညျရှိနပေါတယျ။ စကျရုံတှကေို အသေးစိတျ နိုငျငံအလိုကျ ရတှေကျကွညျ့မယျဆိုရငျ အာရှတိုကျအတှငျးမှာပဲ တရုတျနိုငျငံမှာ ၃၃၇ ရုံ၊ အိန်ဒိယမှာ ၉၉ ရုံ၊ အငျဒိုနီးရှားမှာ ၇၉ ရုံနဲ့ ဗီယကျနမျမှာ ၇၆ ရုံ၊ ဒါ့အပွငျ ဂပြနျ၊ ကိုရီးယား၊ ထိုငျဝမျ၊ ထိုငျး၊ ကမ်ဘောဒီးယား၊ ပါကစ်စတနျနဲ့ ဖိလဈပိုငျနိုငျငံတို့မှာ စကျရုံပေါငျး ၁၀ ရုံကနေ ၆၀ အထိ စကျရုံအရအေတှကျရှိပါတယျ။ ဒါတောငျ ကမ်ဘာ့အရှပေို့ငျးအာရှတိုကျတဈခုတညျးအတှငျးမှာပဲ ရှိပါသေးတယျ။ အနောကျနိုငျငံတှနေဲ့ ဥရောပတိုကျတှကေို ထညျ့သှငျးမရတှေကျရသေးပါဘူး။
အံ့သွစရာကောငျးတဲ့တဈခကျြက Adidas အမှတျတံဆိပျရဲ့ မိခငျတိုငျးပွညျဖွဈတဲ့ ဂြာမနီနိုငျငံမှာတောငျ Adidas စကျရုံ ၂၃ ရုံပဲ တညျထားပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ဒီအရအေတှကျဟာ ဥရောပတိုကျမှာတော့ အမြားဆုံးပါ။ တခွားဥရောပနိုငျငံတှဖွေဈကွတဲ့ အီတလီ၊ စပိနျနဲ့ ယူကအေတှငျးမှာ စကျရုံပေါငျး ၁၃ ရုံ။ ဆှီဒငျ၊ ဒိနျးမတျနဲ့ ဖငျလနျနိုငျငံတို့မှာ စုစုပေါငျး ၉ ရုံ (ဆှီဒငျနိုငျငံထဲမှာပဲ ၇ ရုံ) တညျထားပါတယျ။ နောကျပွီးသွစတေးလတြိုကျနဲ့ နယူးဇီလနျတို့မှာလညျး စကျရုံတှတေညျထားပမေယျ့ စကျရုံ ၁၀ ရုံအထိ အရအေတှကျကို လြှော့ခလြိုကျပါတယျ။ အမရေိကတိုကျအနနေဲ့ဆိုရငျလညျး ကုနျထုတျလုပျတဲ့ စကျရုံတှတေညျထားတာ မြားပွားတယျလို့ ဆိုရမှာပါပဲ။ ဘာလို့လညျးဆိုတော့ အမရေိကတိုကျမှာ စကျရုံပေါငျး ၂၁၅ ရုံရှိနလေို့ပါပဲ။ မွောကျအမရေိကတိုကျအတှငျးမှာ အမရေိကနျနိုငျငံဆိုရငျ ၇၁ စကျရုံ၊ ကနဒေါမှာ ၂၉ ရုံနဲ့ မက်ကစီကိုတို့မှာ ၁၉ ရုံ အသီးသီး တညျထားပွနျပါတယျ။ တောငျအမရေိကတိုကျမှာဆိုရငျ ကုနျထုတျလုပျတဲ့ စကျရုံအမြားဆုံးကတော့ ဘရာဇီးနိုငျငံဖွဈပွီး စကျရုံပေါငျး ၅၀ အထိရှိနပေါတယျ။ အနောကျတိုငျးနိုငျငံခညျြးပဲ ပေါငျးလိုကျရငျတော့ အရအေတှကျ အတျောလေးမြားတယျလို့ ဆိုလို့ရပါတယျ။
ပွညျ့မီတဲ့အဆငျ့အတနျးနဲ့ Adidas ကုနျပစ်စညျးအရညျအသှေးကို ထိနျးသိမျးထားနိုငျမှု
ဥပမာအနနေဲ့ပွောရမယျဆိုရငျ iPhone တှကေိုပဲကွညျ့ပါ။ iPhone တှဟော ဝယျလိုအားနဲ့ ရောငျးလိုအားမမြှတဲ့အတှကျ iPhone တှကေို အရအေတှကျမြားမြားထုတျဖို့ တရုတျပွညျမှာစကျရုံတှေ တညျထားတယျဆိုတာ အားလုံးသိကွမှာပါ။ ဒါပမေယျ့ ပါဝငျတဲ့နညျးပညာ၊ အရညျအသှေးနဲ့ တာရှညျခံမှုတှကေတော့ တဈကမ်ဘာလုံးမှာရှိတဲ့ iPhone တှနေဲ့ တနျးတူပါပဲ။ မွနျမာနိုငျငံအတှငျးမှာရှိနတေဲ့ KFC လို စားသောကျဆိုငျမြိုးဆိုရငျလညျး တညျထားတဲ့နိုငျငံသာ ကှဲပွားသှားတာ သူ့ကွကျကွျောရဲ့အရသာနဲ့ ခကျြထားတဲ့ဟငျးခကျြနညျးစနဈဟာ တဈကမ်ဘာလုံးနဲ့တနျးတူပါပဲ။ ဒီလိုနညျးတှနေဲ့ပဲ အခွားနိုငျငံကတငျသှငျးလာတဲ့ ထုတျကုနျပစ်စညျးတှနေဲ့ အစားအသောကျတှကေို ကြှနျတျောတို့ဟာ ဝယျယူစားသုံးနကွေတာပါ။ အဲဒီအခကျြဟာ Adidas အတှကျလညျး တနျးတူအကြိုးသကျရောကျမှုရှိပါတယျ။
ဂြာမဏီနိုငျငံက ထုတျလုပျပွီး Made In က အငျဒိုနီးရှားဖွဈလို့၊ တရုတျဖွဈလို့၊ ဗီယကျနမျဖွဈလို့ ဝယျဖို့တှနျ့ဆုတျနတေဲ့ အတှေးတှကေို ဒီစာလေးဖတျပွီးရငျ ဖြောကျဖကျြလိုကျဖို့လိုပါတယျ။ ဘာဖွဈလို့လညျးဆိုတော့ Adidas စကျရုံတိုငျးမှာ ဟိုးအစဉျအဆကျ တောကျလြောကျခမြှတျလာခဲ့တဲ့ အရညျအသှေးထိနျးသိမျးဖို့ နညျးစနဈနဲ့ လိုကျနာရမယျ့ စညျးမဉျြးစညျးကမျးတှေ ရှိနလေို့ပါပဲ။
တဈကမ်ဘာလုံးကိုတငျသှငျးရမယျ့ ထုတျကုနျတှကေို Adidas အနနေဲ့ အရညျအသှေးအလြော့ခံပွီး Brand နာမညျအကခြံပါ့မလားဆိုတာကို တဈခကျြစဉျးစားကွညျ့ပါ။ ဒီလောကျဆိုရငျ ဘာကွောငျ့ Made In နိုငျငံတှဟော ကှဲပွားရသလဲ? ကှဲပွားမှုအပျေါမှာ အကြိုးသကျရောကျမှု ဘယျလိုရှိသလဲဆိုတာကို အားလုံးသိသှားကွလိမျ့မယျလို့ မြှျောလငျ့ပါတယျ။
Made In နိုငျငံကိုကွညျ့ပွီး ကုနျပစ်စညျးတဈခုရဲ့တနျဖိုးကို ခနျ့မှနျးသတျမှတျတာ မမှနျကနျဘူးဆိုတာကို ဒီစာလေးဖတျပွီး သိရှိနားလညျသှားမယျလို့ ထငျပါတယျ။ နာမညျကွီးထုတျကုနျတဈခုရဲ့ စဈမှနျမှုအရညျအသှေးကတော့ ဘယျနိုငျငံကပစ်စညျးနဲ့ ယှဉျယှဉျ အတူတူပဲဆိုတာ အားလုံးသိဖို့လိုပါတယျ။ အခြိနျပေးပွီး ဒီအထိဖတျရှုခဲ့ပေးတဲ့ Adidas ပရိသတျမြားကို ကြေးဇူးအထူးတငျပါတယျ။ နောကျလညျး အားလုံးဗဟုသုတရမယျ့ အခုလိုပို့ဈလေးတှကေို တငျဆကျပေးသှားပါ့မယျ။ ဖတျရှုသူ စာဖတျပရိသတျမြားအားလုံးကို အစဉျလေးစားလကျြပါလို့ ဒီကနပွေောလိုကျရပါတယျ။